Wafdi Midowga Yurub Ka Socda oo Hargeysa Yimid | Gabiley News Online
Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya, Amb. Nicolas Berlanga iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta soo gaadhay magaalada Hargeysa ee caasimada Somaliland.
Wafdigan ayaa waxay sare u qaadi doonaan cadaadiska xoogan ee Madaxweyne Biixi lagu saarayo in uu aqbalo qabashada doorashooyinka iyo sidii ugu laaban lahaa qorshaha uu dhawaan shaaciyay ee dib u furista ururada siyaasada.
Ujeedka wafdigan ayaa la xidhiidha sidii ay Madaxweynaha Somaliland ugu qancin lahaayen in uu ka laabto qorshaha uu ku rabo in uu dib u furo ururada Siyaasada iyo arrinta Komishanka cusub oo iyadana murugsan.
Khilaafka xisbiyada mucaaridka iyo Xukuumada Madaxweyne Biixi ayaa sii xoogeystay kadib markii madaxweynuhu uu dhawaan shaaciyey in uu dib u furayo ururada siyaasada, arintaasi oo ku sheegay in uu xal u noqonayo khilaafka hadheeyay doorashooyinka.